I-Luxury 2 Bedroom Poolside Villa 6 - I-Airbnb
I-Luxury 2 Bedroom Poolside Villa 6
Koh Samui , Surat Thani, Thailand
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguNicholas
Le villa yobumnandi ibekwe kufutshane ne-Bo Phut Beach kunye nelali yaBalobi kunxweme oluhle olusemantla eThailand, iKoh Samui.
Indawo entle ukuba sesiqithini kwaye sinikezela ngeendwendwe zethu ikhaya elisuka ekhaya elinenkonzo yehotele.
Le ndlu inendawo yokuhlala evulekileyo kunye nendawo yokutyela ekhanyayo, evulekileyo nebethwa ngumoya kwaye inekhitshi le-Euro elinento yonke.
Iifenitshala zitofotofo, zanamhlanje kwaye kukho iminyango epheleleyo yokutyibilika ukuze ukwazi ukwandisa indawo yakho yokuhlala kwibhalkhoni evulekileyo ngaphandle ekhokelela kwipuli enkulu yokuqubha enendawo yokuhlala ye-jacuzzi.
Kukho nebhalkhoni engasemva kunye negumbi lokuhlambela eliphantsi.
Ukunyuka uye kumgangatho wokuqala ngemigca ecocekileyo yezitepsi zaseSweden, uza kufumana amagumbi okulala amabini, ibhedi elala abantu ababini enye inebhedi elala abantu ababini, nganye inebhalkhoni yayo negumbi lokuhlambela elinomnyango ophumela ngaphandle.
Ibekwe kude kufuphi neBo Phut Beach kunye neLali yaBalobi, yenye yezona ndawo zibalaseleyo zaseKoh Samui. Apha uya kufumana uninzi lweebhari ezinobuhlobo zosapho kunye neeresityu ongakhetha kuzo ecaleni kolwandle oluhle.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ngokwayo ibekwe emazantsi eenduli ze-Bophut, iimitha ezingama-500 ukusuka kwindlela yase-Koh Samui kunye nekhilomitha ukusuka kwi-Bophut Beach / kwilali yabalobi.
Iivenkile ezinkulu kunye neevenkile ezifanelekileyo ezikufutshane.
Kuphela yimizuzu eli-15 yokuqhuba ukuya kwidolophu ephambili ye-Koh Samui eChaweng apho uya kufumana indawo yakho yokuthenga kunye neyobusuku.
Mna kunye neqela lam siya kunceda iindwendwe zethu ngayo nayiphi na indlela okanye indlela ukwenza iholide yazo ibe yeyokukhumbula. Fika njengoko iindwendwe zihamba njengabahlobo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Koh Samui